Umjelo wokuhlamba iimoto
Ngokutshintshela amacandelo anzima njenge-corrector yokungena, umzila wesikhokelo kunye namatyathanga kunye ne-HONGSBELT® egudileyo, ibhanti lokuhambisa eliqhubekayo, imboni yokuhlamba imoto inokuphucula kakhulu ukhuseleko lwabasebenzi kunye nokunciphisa ingozi yokulimala kwemoto. Ibhanti lokuhambisa elikumgangatho ophezulu le-HONGSBELT® lenza ukuba abaqhubi bokuhlamba iimoto bonge ixesha kunye nemali ngenkqubo eqhelekileyo. Ngokunciphisa umngcipheko kunye nokuphucula ukhuseleko lwabasebenzi, banokunciphisa iindleko ze-inshurensi.
A. Khusela imoto kumonakalo ongeyomfuneko -- Ezo kuhlamba iimoto ezinebhanti yokuhambisa i-HONGSBELT® zivumela imoto yabathengi ukuba iqhube ngokuthe ngqo kwibhanti yokuhambisa endaweni yokulungelelanisa kwisilungiso esiyinkimbinkimbi, ngaloo ndlela ithintela umonakalo kwiimoto. Ngokususwa komzila wesikhokelo kunye namatyathanga, umonakalo kwiirimu, amathayi, iindawo zokuqhawula, imibhobho yokukhupha ngokwezifiso kunye nomzimba wemoto nazo zithintelwe ngokufanelekileyo.
B. Ukuphucula ukhuseleko lwabasebenzi -- Ukuhlamba iimoto kunokufakelwa i-HONGSBELT® ibhanti lokuhambisa elihambelana nomgangatho wekhonkrithi, okwenza abasebenzi basebenze ngokuthe ngqo kwibhanti yokuhambisa ngaphandle kokuhamba ukusuka kwenye indiza ukuya kwenye.